မပန် မင်္ဂလာပါ။ လာလည်သွားတယ်ဗျ။ ဒီပို့စ်လေးမှာပဲ နှုတ်ဆက်သွားတယ်ဗျ။
မကြီးပန်ရေ ကဗျာလေးက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ တအားလှတယ်ဗျ။ နောက်လည်းဒီလို အဖွဲ့လေးတေါ ရေးပါဦးဗျ.. ပျော်၇ွှင်ပါစေ..
မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ ... တခါတခါ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်တတ်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ... ရှင်သန် ကြီးထွား နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ အမဲရိုး တချောင်းသာ မြေကြီးထဲမှာ ကျန်ခဲ့ရတာ ... ။
ဘာရယ်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ပန်ပန့် ကဗျာလေးက အများကြီး အတွေးတွေ ရသွားစေပါတယ် ... ။
ကျေးဇူးပါ ပန်ပန် ... ။
ဆီပုံးမတွေ့ လို့ဒီမှာ အော်ခဲ့တယ်နော့
Marry Chris Must! ahhh .. :-P chorry! Merry Christmas !
ဆီဗုံးပျောက်နေတာကြာနေပြီနော်။ လာသွားတယ်အစ်မရေ။ နေကောင်းရဲ့လား။ အစ်မလည်းပျောက်နေသလိုပဲနော်။
Merry Christmas ပါအစ်မရေ။
လက်ဆောင်မပေးရင်တော့ အတွေ့ပဲ ဟွန်း
ပန်ပန်ရေ..စာပန်းချီလေး ကတော့..ထုံးစံအတိုင်း..လက်ထွက် စစ်စစ်ကလေး ပဲ..း)
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ် ကာလ နဲ့ နှစ်သစ် ဆုမွန် ချွေလိုက်တယ်။ ( ကောက်ကြည့်)
ပန်ရေ...ပန့်Blogရဲ့ပုံမှန်ဧည့်သည်ပေမယ့် commentကတော့ ပထမဆုံးရေးဖြစ်တာပါ...စုတ်ဖွားလေးက မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အားကျမခံအရိုးပင်လေးစိုက်ထားတာများလား?ကလေးလေးက ကစားစရာကားကလေးမြေကြီးထဲမြှတ် ကားပင်လေးစိုက်တဲ့TVကြော်ငြာတခုထဲကလိုပေါ့